Ravalomanana, Lalatiana, Rajoelina : Fitiavan-tena sy famitaham-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana, Lalatiana, Rajoelina : Fitiavan-tena sy famitaham-bahoaka
Lohateny vaventy navoakan’ny Midi Madagasikara ny sabotsy lasa teo, andro nandevenana ny filoha teo aloha Zafy Albert ny hoe: “funérailles nationales de Zafy ce jour: Rajoelina et Ravalo évitent Hery Rajaonarimampianina”. Izany hoe, noho ny fanatrehan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fandevenana ny profesora no antony tsy nahatongavan’izy roalahy ireto. Nitory an’i Maherilanto araka ny voalazan’ny andininy faha-20 (cybercriminalité), ary hiakatra eny anivon’ny Fampanoavana androany i Lalatiana Rakotondrazafy. Ireo no anisan’ny zava-nitranga nanamarika iny faran’ny herinandro iny, izay azo adika avy hatrany ho fitiavan-tena sy famitaham-bahoaka tsotra izao.
Tsy maty voalavo an-kibo
Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina no mpitondra sahy nampiasa hery sy fisetrasetrana mivantana tamin’ny profesora Zafy Albert. Tora-bato sy vono no nahazo ity filoha teo aloha ity, ary ireo mpiara-dia taminy teo amin’ny kianjan’ny 13 Mey ny volana Desambra 2005. Nanohitra ny fitondrana Ravalomanana ny profesora Zafy Albert, ary nanangana ny CRN izay nidina an-dalambe tamin’izany andro izany. Nanirahan-dRavalomanana ireny antsoina hoe “gros bras” ireny ny profesora Zafy, ka niharan’ny setrasetran’ireto be sandry ireto.
Toraka izany koa ny zava-nitranga nandritra ny fitondrana Rajoelina. Ny fiara nitondra ny profesora Zafy Albert mihitsy no niantefan’ny lakrimozena araka ny baiko nomen’ny filohan’ny HAT raha iny izy nikasa hikabary teo anoloan’ireo vahoaka nanara-dia azy. Nanohitra ny fitondran’olon-tokana (unilatéralisme) nisy nandritra ny Tetezamita ny profesora ka nitarika ny hetsika “rodobe”. Tsy niandry ela valin-kafatra avy tamin-dRajoelina ka dia norarafana lakrimôzena ny fiara nitondra ny filoha teo aloha Zafy Albert.
Inona no tiana ambara amin’izany rehetra izany? Tsotra: na Marc Ravalomanana, na Andry Rajoelina dia samy nankahala ny profesora Zafy Albert avokoa. Famitaham-bahaoka fotsiny ny filazana fa tsy te hifanatri-tava amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina no antony tsy nandehanan’izy ireo nanatrika ny fandevenanana ity filoha teo aloha ity. Vitan-dRavalomanana Marc ny mitety Faritany manao propagandy mialohan’ny fotoana, vitan-dRajoelina ny nandeha tany Ambovombe nanao dokam-barotra tamin’ireo vahoaka tratan’ny kere, fa fahasahiranana ho azy ireo kosa ny nandeha tany Bitsiaka Ambilobe nanotrona ny fandevenana ny profesora satria nanelingelina azy ireo fatratra tokoa ity filoha teo aloha nandritra ny fitondrana Ravalomanana sy Rajoelina, ary mbola tsy maty voalavo an-kibo mihitsy izy ireo.
Voaporofo koa izao fa fitiavan-tena fotsiny ihany no mibaiko an’i Lalatiana Rakotondrazafy. Nanohitra mafy ny andininy faha-20 mikasika ny “cybercriminalité” ny tenany, ary nitaona sy niantso ny vahoaka hanohitra izany amin’ny fomba rehetra. Ankehitriny anefa mitory an’i Maherilanto Manandafy araka ny voalazan’io andinin-dalàna io i Lalatiana Rakotondrazafy. Izany hoe, tsy azo hampiharina amin’ny tenany sy ny mpiara-dia aminy io andininy faha-20 io fa endrika jadona mifanohitra tanteraka amin’ny foto-kevitra demôkratika; rehefa izy (Lalatiana Rakotondrazafy) kosa no mahatsiaro ho voatohintohina sy afa-baraka dia tena mety ary tokony hampiharina ilay andininy faha-20 momba ny “cybercriminalité”.
Fehiny, fitiavan-tena sy famitaham-bahoaka! Izay no azo hamintinana ny fihetsik’izany Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina ary Lalatiana Rakotondrazafy izany. Tsy mahagaga mihitsy raha nifandona sy nifamotika tanteraka ny taona 2009, ary mety tsy hifandevi-maty rahateo koa. Tsy mahagaga ihany koa ankehitriny raha samy manohitra izao fitondrana Hery Rajaonarimampianina izao satria iray fonosana sa my tia tena sy mpamita-bahoaka izay.